Norway | News From Somalia
Aqooyahan Maxamed Xasan”Waxaan ogaaday in Kenya ay rabto Jubbooyinka iyo Gedo ku darto Gobalada NFD,Sidaasi ayaana uga baxay baxay Shirka”
Posted on April 18, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa maalinba maalinta xigta kusoo baraarugaya qorshaha gumeysi ee Dowladda Kenya ladamacday Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo.
Mujaahidiinta xarakada Alshabaab oo ah quwada kaliya ee ka dhiidhisay duulaanka Kenya iyo Damacooda Dhaqaale ee ka dhan ah Jubbooyinka ayaa horay usheegtay in Dowladda Kenya doonayso in Jubbooyinka iyo Gedo hoos geyso Gobalada NFD la isku yiraahdo oo haatan gacanta Kenya ku jira.
Dad badan oo isagu jira Aqooyahano iyo Odayaal ayaa lagu qalday shirka ka socda Kismaayo oo la sheegay in lagu dhisayo Maamul labaxay Jubbaland State.
Rag badan ayaa kabaxay shirka Kismaayo kuwa kalana waxaa lagu qasbay inay ku nagaadaan shirka inta looga dhawaaqayo Maamulka.
Aqooyahan Maxamed Cali Xuseen waxa uu kamid ah aqooyahano Muqdisho ka tagay si ay kaga qeybgalaan shirka ka socda Magaalada Kismaayo.
Aqooyahanka ayaa isagoo lahadlayay mid kamid ah Idaacadaha Muqdisho wuxuu kahadlay waxyaabihii uu ku soo arkay howlka shirka iyo waxa keenay inuu isaga baxo shirka.
Aqooyahanka oo kamid ah Dadka ka soo Jeeda Gobalada Jubbooyinka ayaa sheegay inuu kamid ahaa Ergadii ka qeybgalaysay shirka islamarkaana uu soo arkay waxyaabo cad oo muujinayo in Kenya duulaankeeda uu yahay mid gumeysi oo doonayso in Jubbooyinka ay ka jarto Soomaaliya Inteeda kale.
“ujeedka shirka Kismaayo waa gumaysi cad oo Kenya ay ku rabto y in gacanta loo galiyo Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo oo lagu darro gobalada la isku yiraahdo NFD” ayuu yiri Aqooyahan Maxamed Xasan Cali.
Aqooyahan Maxamed Xasan Cali ayaa sidoo kale sheegay in ceelal shidaal oo ku yaala Jaziirada kudhaa la doonayo in lagu wareejiyo Dowladda Norway.
“waxaan kaloo soo ogaaday in Ceelal shidaal lagu wareejinayo Dowladda Norway oo horay heshiiskaasi uu ula saxiixday Ra’iisul Wasaarahii hore Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas”ayuu yiri Markale Maxamed Xasan.
Si kastaba ha ahaatee Dowladda Kenya ayaa haatan waxaa gebo gabo u ah shir ka socda Kismaayo halkaasi oo doonayso inay ku dhisto Maamul Maqaarsaar ah.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo Dowladda Norwey heshiis la soo saxiixday ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho.
Jawaari oo saxaafada uqabtay shir jaraa’id ayaa carabka ku adkeeyay isaga iyo xildhibaano uu hogaaminayay howllo shaqo inay u aadeen Dalka Norway oo uu dhalasho ka haysto.
Jawaari ayaa tilmaamay in wafdiga uu hogaaminayay marti qaad ka heleen Dowladda Norway sidaasina ay ku tageen Magaalada Oslo oo uu sheegay inay kulamo kula qaateen madax katirsan Norway.
“safarka aan ku aaday Norway waxa aan aheyn wafdi ballaaran oo waxaa I wehliyey gudoomiyeyaasha gudiyada joogtada ah oo ilaa hada halkaasi shaqo ugu maqan, ujeedaduna waxey aheyd inaan mataaneyno Baarlamaannada Soomaaliya iyo Norway si aan u yeelanno wada shaqeyn joogta ah islamarkaana aan qibradaha isdhaafsano oo aan ka kororsano waxa ay na dheeryihiin”ayuu yiri Jawaari iyadoona dad badan is weydiin karaan waxa laga koran san karo Baarlamanka Norwey oo wax kasta ay kala horeyso dimuqraadiyada lagu aflagaadeeyay NNKH.
Warar lagu kalsoonyahay oo la xigatay ilo wareedyo dhanka Dowladda katirsan ayaa sheegay in Wafdiga Jawaari Xukuumada Norway usoo bandhigtay in lacagta mushaarkooda bixinayso Norway haddii ay ogolaadaan in Badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 Meyl.
15 iyo tobanka gudi ee lasocday Jawaari ayaa isku khilaafay warka kasoo baxay Dowladda Norway iyadoona kuwa kasoo horjeestay qorshaha Norway lagula haray Magaalada Oslo lamana oga waxa ay ula hartay Norway oo ay kadamacsantahay Xubnahaasi laakin waxay ubadantahay inay qaadan doonaan mashruuca Norway.
jawaari ayaa shirkiisa jaraaid ku sheegay in guud ahaan qodobadii ay ka wada hadleen madaxda Dowladda Norway la isku afgartay oo ay ku soo dhamaadeen guullo la taaban karo.
dadaalka adag ee markale Dowladda Norway kusoo faragalisay baddeena Soomaaliya ayaa laga dhadhan sankaraa in guud ahaan ay casuuntay Gudiyada Baarlamanka oo ay u araktay inay dhameestiri karaan qorshaheeda ka dhanka ah baaxadda Badda Soomaaliya.
Norwey iyo Faransiiska ayaa Kenya ku dhiiragaliyay inay weerarto Kismaayo si marka Alshabaab looga fogeeyo ay u qaataan qeyraadka dhex ceegaaga Badda Soomaaliya gaar ahaan xeebta ku teedsan Kismaayo.
MAQAAL:-Qorshaha Reer Galbeedka ee ku Wajahan Soomaaliya.
Posted on February 7, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Ugu horeyn waxaan ka cudur daaranayaa in aanan maqaalkan oo kaliya kusoo koobi karin Istaraatiijiyada reer galbeedka ee ku wajahan Soomaaliya, hase ahaatee waxaan soo qaadan doonaa qeybo kamid ah Inshaa’allaah.
1945 markuu gabagabada ahaa waxa loogu yeeray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ra’iisul wasaarihii ingiriiska Winiston Churchill iyo ururkii Sahyuuniyadda ee lagu aas aasay dalka Austoria waxay heshiis ku galeen wixii ka dambeeya 2010ka in Yahuuda dagto dalalka Geeska Afrika laga soo billaabo harooyinka Victoriaillaa iyo Badda cas.
Waxaa taa barbar socda hoos u dhaca dhaqaalaha reer galbeedka oo soo bilowday markii uu dagaalkii qaboobaa dhamaaday kaasoo wixii ka dambeeyay2000 u xuub siibtay burbur saameyn weyn keenay, kadibna waxaa soo cusboonaaday dalab ah in la boobo dhaqaalaha caalamka islaamka ku jira sida:- Ciraaq, Afganistaan, Somaaliya, Nayjeeriya, Maali iyo wadamo kale si loogu kabo ra’sumaaliyada caalamiga ah ee uu burburka dhaqaale ku socdo.
Ugu dambeyntii waxaan nafteyda iyo tan muslimiinta kale ee Soomaaliyeed ugu baaqay Allaah ka cabsi iyo raacidda sunada Nabigeena Muxamad SCW taasoo aan ku gaari karno badbaadada adduunyo iyo tan aakhiraba.
Allaah SW wuxuu ina farayaa in aan u hogaansanaano awaamiirtiisa oo dhan waxaana kamid ah jihaadka oo nalaku waajib yeelay marka gaalo inagu duusho.
Maanta dalkeena waxaa jooga gaalo saliibka wadata oo dooneysa in aan ku dhaqano dastuurkooda diinteenana ka tagno. Haddaba intaan gaalada adeecno miyaan Allaah caasinaa? Waa maya! “Subxaanallaah” walaalayaal waxaa inala gudboon in aan difaacano diinteena, dalkeena iyo dadkeena.
قال تعالي: يا ايها الدين ءامنو هل ادلكم علي تجارة تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
Kuwa xaqa rumeeyow ma idin tusiyaa ganacsi idinka badbaadiya cadaab daran. Waxaad rumeeneysaan Allaah iyo Rasuulkiisa waadna ku dagaalameysaan jidkiisa xaqa ah adinkoo xoolihiina iyo naftiina u huraya, sidaas ayaana idiin kheyr badan haddaad tihiin kuwa wax og.
Markaas Allaah dambigiina ayuu dhaafayaa wuxuuna idin galinayaa Jannooyin ay dhex socdaan webiyaal iyo guryo wanaagsan oo ku dhex yaala Jannada Cadnin (nagaanshaha), taasina waa liibaan weyn.
WQ: Prof. Cali Xaaji Iidle.